आज प्रियंका चोपडाको जन्मदिन, च्यातिएको जुत्ता सिलाएर लगाउने प्रियंका कसरी पनि स्टार ? « गोर्खाली खबर डटकम
आज प्रियंका चोपडाको जन्मदिन, च्यातिएको जुत्ता सिलाएर लगाउने प्रियंका कसरी पनि स्टार ?
बलिउडका साथै हलिउडमा पनि आफ्नो स्थान बनाउने ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपडाको आज (१८ जुलाई) मा जन्मदिन हो । उनी आजबाट ३८ वर्षमा लागेकी छिन् । प्रियंका चोपडाले जुन सफलता हात पारेकी छिन् त्यो हरेक युवतीका लागि प्रेरणादायी छ । उनको जन्मदिनको मौकामा उनीबारे केही रोचक तथ्य थाहा पाऔंः
बोलबम बोकेको बोलेरो गाडी रौतहटको नहरमा